Naturgy: njengenye indlela yotyalo mali kwi2019 | Ezezimali
I-Naturgy yenye yezokhuseleko ezenza okusemgangathweni kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain. Zombini ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka nakulo uphelileyo, kwaye ukuya kwinqanaba lokuba sesinye sezona zikhundla zibalaseleyo yisebenzise kakuhle imali oyongileyo. Akumangalisi ukuba, lelinye lawona macandelo anyusa kakhulu kwimarike yemasheya enje ngombane. Apho imbuyekezo entle kakhulu ifezekiswa kuzo zonke iinkampani ezidwelisiweyo okwangoku. Ezi nkampani zidweliswe njenge-Iberdrola, i-Endesa okanye i-Naturgy uqobo. Ngeendlela ezintle kakhulu malunga nokuvela kwayo kwiinyanga ezizayo.
Ngokubhekisele kwi-Naturgy, akufuneki ilibale ukuba inkampani ekhokelwe nguFrancisco Reynés ibonakalisile ukuba, ngaphandle kokuthatha olu hlengahlengiso lobalo-mali, ibiya kufumana inzuzo yesiqhelo ye-1.245 yezigidi zeerandi. Ngokufanelekileyo, Iipesenti ezingama-57 ngaphezulu Yintoni abatyali mali abancinci nabaphakathi bayithandayo kakhulu ngokunyuka kwexabiso labo. Kwelinye icala, isabelo sikaNaturgy sonyuke nge-30% kunyaka ophelileyo, saya kwi-1,3 yeuros ngesabelo ngasinye. Ukuba yenye yenkuthazo yokukhetha esi siphakamiso semarike yemasheya yecandelo lemarike yemasheya. Ukuba kwipotifoliyo yabahlalutyi abaninzi bezemali.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba le nkampani kwicandelo lezamandla ibonakalisiwe yiyo ukungazinzi okuncinci, xa bebeka amaxabiso abo kwiimarike ze-equity. Kunqabile ukuba kudlule ukubonakalisa ukunyuka okanye ukuwa ngaphezulu kwe-2%, eyenza ukuba ibe lelinye lamaxabiso azinzileyo kwizabelo zamazwe. Ngomgca weshishini elizinzileyo kwaye elenza ukuba libe yindawo yokuzimela kwabona batyalo-mali abalondolozayo kwiipaki zaseSpain. Njengabalingane bayo kwicandelo, njenge-Endesa okanye i-Iberdrola phakathi kwezinye ezifanelekileyo.
1 Naturgy: inzuzo yakho iyakhula
2 Ukujongana notshintsho lwamandla
3 Ubukho eBrazil
4 Iimpawu zeli xabiso
5 Inzala yabatyali mali
6 Isahlulo esisondele kwi-6%
Naturgy: inzuzo yakho iyakhula
U-Naturgy uvale ngempumelelo unyaka-mali ka-2018, ophawulwe kukufika kukasihlalo omtsha, ukungena kwabanini zabelo abatsha, ukuvuselelwa kwebhodi yabalawuli kunye nolwakhiwo lombutho olula, olunolawulo olucace ngakumbi olunokuzimela okukhulu Leshishini. Unyaka apho amandla ezizwe ngezizwe athi thaca kwimarike imephu yendlela eya ku-2022 yenguqu yayo, kwaye wasungula sicwangciso sokwenza ukufezekisa iinjongo ezibekwe ziintsika ezine zokwenziwa kwexabiso.
Enkosi kwesi sicwangciso sitsha, inkampani sele iqalile ukucacisa ixabiso kwingxelo yayo yengeniso kwiinyanga nje ezintandathu emva kokubonisa Isicwangciso-qhinga 2018-2022, kunye ne-EBITDA eqhelekileyo ye-4.413 yezigidi ze-euro, i-12% ngaphezulu kunonyaka ophelileyo; kunye neenzuzo eziqhelekileyo ze-1.245 yezigidi ze-euro, i-57% ephezulu kune-2017.
Ukujongana notshintsho lwamandla
Ingqonyela yenkampani, UFrancisco Reynés, sigxininise ukuba "simisele iziseko zokujongana notshintsho lweqela, sibeke ishishini kwimeko yotshintsho lwamandla kwaye sifezekise iinjongo ezibekwe kwimephu yendlela entsha. Iziphumo zonyaka-mali ka-2018 zibonisa ukuvela okuhle kwamashishini, kodwa kuyakubakho kule minyaka imbalwa izayo apho siza kubona ukuphucuka okubonakalayo kwiziphumo njengoko siqhubela phambili ekuphunyezweni kwesicwangciso ”.
Ukwafuna ukuqaqambisa "umsebenzi wokwenza lula obalulekileyo owenziweyo kunye nokuzimisela ukudala ixabiso kubanini zabelo." Ukongeza, wachaza ukuba "isivumelwano kunye no-Sonatrach okanye utyalomali olutsha kwizinto ezivuselelekayo eBrazil nase-Australia ziyimizekelo ebalaseleyo yenkqubela phambili kwinqanaba lamazwe aphesheya." Esi sicwangciso-qhinga samkelwe kakuhle kakhulu ngabatyali mali kwaye ngenxa yoko, ukuthengwa kucacisiwe kwintengiso. Ngaphantsi kwe- Ukungenzi nto ngokungagungqiyo, njengakwelinye icala onke amaxabiso ecandelo lombane abonisa, ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo.
Enye into enika ukungqinelana kwixabiso ubukho obomeleleyo kwezinye iindawo zamanye amazwe. Umzekelo, eBrazil apho umdla wenkampani yombane uvuselelwe kwaye idlala indima efanelekileyo kwiiakhawunti zayo zeshishini. Ngale ndlela, kufanele kuqatshelwe ukuba i-Naturgy, ngokusebenzisa Ukuveliswa kwaMandla kwiHlabathi liphela (GPG), inkxaso-mali yamazwe aphesheya yokuvelisa umbane, iqale ukusebenza kwezorhwebo ngezityalo zelanga zeGuimarânia, ezibekwe kwiphondo laseMinas Gerais.
Inkampani ityale imali engaphezulu kwe-95 yezigidi ze-euro kuphuhliso lwezixhobo zimbini ze-photovoltaic eziza kuvumela ukuveliswa kwe-162 GWh ngonyaka. Ezi zityalo zitsha zibandakanye utyalo-mali olungaphezulu kwezigidi ezingama-95 zeerandi kwindawo yomhlaba we-143 Ha kwaye zibeke irekhodi elitsha kwixesha lokuphunyezwa kweepaneli zayo ezingaphezu kwama-250.000 ezenziwe eBrazil (29%) nase China (71) %). Ukuba yinxalenye ebaluleke kakhulu ye- Umgca weqhinga lenkampani.
Iimpawu zeli xabiso
Owayesakuba yiGesi yeNdalo okwangoku ungomnye wesitokhwe esineyona nto iphambili kwezobuchwephesha kubo bonke abenza i-Ibex 35. Kuyinyani ukuba ngexesha lokunyuka kwamanani alala ngasemva kwizikhundla zawo. Ngelixa ngokuchaseneyo, kwaye le yeyona nto ibalulekileyo, kwi amaxesha okuphumla yeeSpanish equities, yenza ngcono kakhulu kunamanye adwelisiweyo. Njengoko kunokubonwa kwiiseshoni zokugqibela zokurhweba. Ngomthamo wekhontrakthi, kwelinye icala, ubaluleke kakhulu kwaye ubonakalisa umdla kwicala labatyali mali abancinci nabaphakathi.
I-Naturgy lixabiso elinokuthi liqwalaselwe njenge ikepusi ephezulu. Ngamanye amagama, kukho ukutshintshiselana okubalulekileyo kwezokhuseleko phakathi kwabatyali mali yonke imihla. Icandelo elivela ikakhulu kwezona zinto zikhuselayo okanye ezilondolozayo kwiimarike zezemali. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi ukusuka kwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Ukuba sesinye sezindululo kwimarike yemasheya exabise kakhulu kwiinyanga ezidlulileyo, ngeenxa zonke amanani amabini.
Inzala yabatyali mali
Ngayiphi na imeko, kukho enye into enefuthe elihle kakhulu kwixabiso lombane. Kuyinyani ukuba kuyacetyiswa ngabaninzi beearhente zezemali abajonga ukuba zikwindawo yokuthenga. Ngaphandle kohlengahlengiso olomeleleyo olufunyenwe kule minyaka mibini idlulileyo. Ngale ndlela, bajonga ukuba isenako ukukhula okunokubakho. Ubuncinci ukuya kuthi ga ngoku ixesha elifutshane neliphakathi nangaphezulu kwezinye zeetshipsi ezibaluleke kakhulu kwizibalo zaseSpain.
Ngaphakathi komxholo ngokubanzi, yenye yexabiso apho kuya kufuneka ukuba kumiselwe khona i-radar bathathe izikhundla kwiintsuku ezizayo. Ngokukodwa ukuba kukhatshwa kukusebenza okuhle kwiimarike zamashishini ezingenanzala emisiweyo. Nangona kunjalo, ukuba iintshukumo ezingazinzanga ziveliswa kuzo, alithandabuzeki elokuba eli xabiso lelinye lezona zichaphazelekileyo, njengoko besesiphawulile ngaphambili. Unokukhuseleka ngakumbi kwizikhundla zakho, nangona ngaphandle kwenzuzo eveliswa ngamaxabiso anamandla ngakumbi kwisalathiso somgangatho wokukhetha kwimarike yaseSpain.
Isahlulo esisondele kwi-6%
Kwelinye icala, elinye lamaxabiso ongezelelweyo anokuqeshwa ngabatyali mali kukuba ivelisa igalelo elinomtsalane minyaka le. Kunye Inzala yonyaka kunye neqinisekisiweyo kufutshane kakhulu ne-6%, yenye yezona ziphezulu kwizabelo zamashishini ezingenanzala emisiweyo. Ukuze ngale ndlela, abatyali mali abancinci nabaphakathi banokwenza iphothifoliyo yengeniso esisigxina ngaphakathi kokungafaniyo. Ngaphandle kokuvela kwezabelo zakho kwiimarike ze-equity. Ukuzilungelelanisa njengokhetho olunamandla kakhulu ukwenza ibhegi yokonga ezinzileyo kule minyaka imbalwa izayo.
Konke oku, kwimeko apho iimveliso zebhanki zibonelela ngengeniso encinci ngenxa yoku Ixabiso eliphantsi lemali. Ngemida yokungenelela engadluli kumyinge we-0,50%, njengoko kunjalo ngeakhawunti ezinengeniso ephezulu, ixesha eligcinwe kwaye, ngokubanzi, nezicwangciso zokonga. Le nyani ibangela uninzi lwabasekeli baxhomekeke kwixabiso elifana neli elinikezela ngembuyekezo kwikapitali enomdla kakhulu kuyo nayiphi na imbono. Ngeentlawulo ezahlukeneyo ezenziwa unyaka wonke.
Kwelinye icala, kukho inyani yokuba imele umgca weshishini ozinzileyo nozinzileyo, ofana nombane. Njengangoku, abathengi bahlawula ixabiso elibiza kakhulu ngombane kwiibhili zabo zamakhaya. Le yinto echaphazela ixabiso lezabelo zale nkampani kwicandelo lombane. Nangona kukhuphiswano olomeleleyo nezinye iinkampani kule nkonzo yeenkonzo zamandla. Nokuba yeyiphi indlela, ngeli xesha kunomdla wokuvula izikhundla kunokuzivala. Ubuncinci kwinto ekubhekiswa kuyo kwixesha elifutshane njengesicwangciso sokwenza ukonga okunenzuzo ngamathuba amakhulu okuphumelela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Naturgy: njengenye indlela yotyalo mali kwi2019